Akụkọ - Ngwa ugbu a | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji nke 3)
Intel na-eche ikpe 32 ikpe maka Specter na Meltdown
Intel na-eche ikpe 32 ikpe maka Specter na Meltdown. Chọpụta ihe banyere nsogbu ndị ụlọ ọrụ ahụ na-eche ihu site na njikwa ya na ọnọdụ a.
Oge ndị a abụghị oge dị mma maka ụlọ ọrụ Taiwanese nke yiri ka ọ na-emikpu n'ime olulu miri emi. Ebe ọ bụ na afọ ụfọdụ…
Ọganihu a na-enweghị ike igbochi anya nke cryptocurrencies na-enwe gburugburu ụwa, nke ahụ kpatara kpatara mmụba na-enweghị atụ na uru ha, na-egbochi SETI ka ọ ghara ịga n'ihu na-achọ ọhụụ ọgụgụ isi ụwa
Google abanyela nkwekọrịta na ụlọ ọrụ Getty Images: ọ ga-ewepu otu ọrụ nke Google Images wee mee ka ozi nwebisiinka buru ibu
Samsung ezipụwo vidiyo vidiyo ya na YouTube nke ọ na-enyocha ụfọdụ atụmatụ anyị ga-ahụ na ọhụụ Galaxy s9 na S9 +
18% nke ndị na-eto eto Spanish na-eri Intanet
18% nke ndị na-eto eto Spanish na-eri Intanet. Chọpụta ihe gbasara data sitere na Ngalaba Ahụike na iji logicalntanetị na-enweghị ọgwụgwọ.
Nke a bụ HomePod n'ime, enweghị ike ịrụzi
AppleP HomePod kụpuola site na iFixit na mgbagwoju anya nke imepụta ya na-eme ka akara nrụpụta pere mpe.
VLC 3.0 dị ugbu a na nkwado maka Chromecast, 8k, HDR na ọtụtụ ndị ọzọ
Nwelite VLC kachasị ọhụrụ rutere nsụgharị 3.0 na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ọhụụ maka ngwaọrụ niile nke ngwa a dakọtara, ya bụ, ha niile.
Onyinye kacha mma Amazon na-enye maka taa (12-02-2018)
N'okpuru, anyị na-egosi gị ihe ndị kachasị amasị anyị anyị nwere ike ịchọta taa na Amazon, na-enye ebe anyị nwere ike ịchọta smartphones, ndị ọkà okwu, kaadị ebe nchekwa, osisi USB ...
YouTube na-ekwuwapụta ọkwa ọhụrụ megide youtubers dị ka Logan Paul
YouTube na-eme ihe megide ndị dị ka Logan Paul. Ndị mmadụ na-eriju weebụ dị ka youtuber a ma ama, n'ihi ya ha na-ewere usoro ọhụụ.
Pornhub na-egbochi ihe omimi miri emi nke ụmụ nwanyị ama ama ama amapụtara na ọgụgụ isi
Igwe ihe nkiri vidio Pornhub ka malitere ịza vidiyo vidio miri emi, vidiyo ndị na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji dochie ihu ndị protagonists na ndị ama ama.
E jidere ndị injinia Russia maka iji kọmputa na-egwupụta Bitcoin. Chọpụta ihe banyere akụkọ a dị egwu nke si Russia.
Budata Ngwa Ngwa Ngwa Ngwaọrụ gam akporo ma nọrọ n ’ozi [SWEEPSTAKES]
Anyị na-ekwu okwu okwu a na-ekwu okwu Bang nke sitere na SPC n'etiti puku ndị ọrụ mbụ na-ebudata ngwa anyị.
France kwupụtara agha na ndị ejiri ụgbọ ala ama
Dabere na akụkọ kachasị ọhụrụ, ndị Gauls na-akwadebe iwu ọhụrụ nke ga-amachibido ndị na-ejide ekwentị na dashboard.
Ndị a bụ mgbasa ozi kachasị mma na Super Bowl 2018
Mgbasa mgbasa ozi Super Bowl abụwo otu n'ime ebe nkiri ndị ọzọ nke ihe omume a. N’isiokwu a anyị na-egosi gị nke kacha mma.
Elon Musk ga-agbanwe aha flamethrower n'ihi nsogbu nwere ike ịdị na kọstọm
Elon Musk gbanwere aha flamethrower site na omenala. Chọpụta ihe banyere nsogbu ndị o zutere na omenala.
Apple ga-arụzi iPhone 7 n'efu na-egosi ozi "enweghị ọrụ" mgbe enwere netwọkụ
Apple ga-arụkwa iPhone 7 site na ozi "enweghị ọrụ". Chọpụta ihe banyere nsogbu ahụ metụtara Apple ekwentị na ụlọ ọrụ ahụ ga-arụzi.
PlayStation 4 na-achọ ịpụ karịa PS3
Ahịa nke PlayStation 4 ga-akarị nke PS3 n'oge na-adịghị anya. Chọpụta karịa banyere ahịa nke console Sony nke gafererịrị ọgbọ ya gara aga.
Ebay ga-akwụsị iji PayPal dịka usoro ịkwụ ụgwọ ha
Ebay agaghị eji PayPal dị ka ụzọ nkwụnye ego bụ isi. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ mkpebi ịkwụsị iji ugwo n'elu ikpo okwu.
Mberede na premiere na ngosi nke Autonomous ụgbọ ala Phantom AI [Video]
Ma ọ bụ na ule ndị a na-eme na mberede ụgbọ ala nwere ike ime na nke a ...
2017 bụ ezigbo afọ maka ịkwụ ụgwọ kọntaktị na Spain: 45% nke ndị ọrụ
Ojiji nke Contactless na Spain na-eru ọnụ ọgụgụ dị mma. N'afọ gara aga 2017 uto nke ndị ọrụ fọrọ nke nta ka 50%
Google emeela ka ọ bụrụ ọkwa na, mgbe ha chere ogologo oge maka nkwenye ndị dị mkpa, ha mechara zụta akụkụ nke HTC's mobile division maka mgbanwe $ 1.100
Onye ọbụ abụ 50 Cent ghọrọ nde mmadụ mgbe ịnakwere Bitcoins maka album ọ wepụtara na 2014
Onye na-abụ abụ 50 Cent kwadoro site na akaụntụ Instagram ya, na ekele maka ire ahịa nke ọba egwu ahụ wepụtara na 2014 na nke o kwere ka iji bitcoin dị ka ụdị ịkwụ ụgwọ, ọ nwere ugbu a karịa 7 nde dollar
Telefónica na-aga imekota ọdịnaya Netflix na Movistar +
Agha ahụ na-abịa na njedebe: Netflix ga-ejikọta ọdịnaya na Movistar +. Chọpụta karịa mkpebi nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ imekọrịta na iwekọta ọdịnaya.
Amazon na-eme ịlele a ihe gara aga na Amazon Go
Nọnyere anyị ka anyị ga-eleba anya n'usoro ọhụrụ a si arụ ọrụ nke Amazon chọrọ ka anyị gafere aha mgbe ịzụrụ.
Intel na-arụ ọrụ ugbu a na ndị na-arụ ọrụ Specter na Meltdown. Chọpụta karịa gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ iji wuo ndị nrụpụta ọhụrụ.
A na-egbochi ụlọ ahịa dị n'ịntanetị OnePlus, a na-ekwu maka ihe dị ka ndị ọrụ 40.000 metụtara
Ọ bụghị ihe niile bụ akwa akwa nke Roses na OnePlus na ọ bụ na ika ahụ n'onwe ya na-egosi na ha tara ahụhụ ...
Anyị na-emefu ego na egwu egwu karịa ka anyị na-etinyebu na CD
Dika nyocha ohuru, anyi na etinye ego karia ego di egwu di egwu kariri ka anyi na etinye na udiri dika CD ma obu vinyl
PcComponent, e-azụmahịa kacha mma na mmekọrịta mmekọrịta na 2017
O doro anya na ọ bụrụ na ị bi na Spen ị maara ụlọ ahịa dị n'ịntanetị PcComponentes. Ọfọn, ụlọ ahịa a nke ngwaahịa metụtara teknụzụ, ...
Chronicle: Akwụkwọ enyemaka ọhụụ ọhụrụ enyere aka na cybersecurity
Akwụkwọ akụkọ: Alphabet ọhụrụ ụlọ ọrụ cybersecurity. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ ewepụtara iji bulie nchebe azụmahịa.
Maka nke a, ikwesighi ịta iko na batrị ekwentị.
Anyị na-ewetara gị vidiyo nkọwa ga-eme ka o doo anya ihe mere na ị gaghị ata batrị ekwentị.
Igwe kọfị Nespresso na igwe kọfị Dolce Gusto, sistemụ abụọ maka ịkwadebe kọfị site na iji capsules mana ọ bụ ezie na ụfọdụ amaghị ya, nwee ọtụtụ iche, anyị ga-egosi gị ihe ha bụ.
Nnukwu ụlọ ahịa Amazon na-enweghị ego na-emeghe ugbu a, Amazon Go
Superlọ ahịa mbụ na-enweghị ATM nke ụlọ ọrụ Amazon na-emepe taa Mọnde n’otu okporo ámá ebe ...
Samsung gosipụtara ikike na ihuenyo 100%
Samsung na-ebuputa patent maka ekwentị enyo 100%. Choputa ihe banyere ekwenti ohuru nke ndi Korea choro.
Google dozie nsogbu a, anyi nwere ike imelite Chromecast anyi
Google amalitela ọrụ iji dozie obere nsogbu a, ụlọ ọrụ ahụ ejirila na-egbochi ahụhụ ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị nwere Chromecast melite ya ugbu a.
OnePlus kwadoro izu ohi data sitere na weebụsaịtị ya
Ruo ndị ọrụ 40.000 metụtara izu ohi data OnePlus. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ nkwenye nke mbanye anataghị ikike ha tara ahụhụ na ha website.
Inyocha vidiyo na YouTube ga-adịtụ mgbagwoju anya
YouTube na-agbachi iwu maka itinye ego na ọdịnaya. Choputa ihe ndi ozo emere web’eme n’oge a.
Google Chromecast nwere ike na-akụ netwọk gị WiFi
Achọpụtala ahụhụ na ngwaọrụ Google Chromecast nke ha nwere ike ịdaba na netwọki WiFi gị, na-ahapụ gị na enweghị njikọ Internetntanetị
MacBook Air gbanwere afọ iri ma na-adị ugbu a
Anyị ga-eme ntakịrị nyocha gbasara akụkọ ihe mere eme nke MacBook Air, laptọọpụ nke ghọrọla ntụaka na ahịa niile ogologo oge.
Nke a bụ egwu Obama tụrụ aro na 2017
Anyị na-ewetara ndepụta nke Spotify nke Barak Obama kwadoro maka 2017, Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị oge mbụ na Barak Obama na-ewere ụdị nnwere onwe a nke a na-ahụtụbeghị na ndị mmadụ na-emetụta ụwa niile.
Gaghị ekwu na nzaghachi Intel na nsogbu Meltdown na Specter dị nwayọ, mana nke ahụ bụ ...
Nintendo Gbanye ga-enwe ọ Netflixụ Netflix ugbu a. Chọpụta ihe banyere nsogbu ndị njikwa na-ewu ewu na-eche ihu na mkparịta ụka ndị na-anaghị aga n'ihu.
Ntughari agha nke mere ka Hawaii maa jijiji, olee otu o nwere ike isi mee?
Na Hawaii n'isi ụtụtụ, ndụmọdụ nke were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji iri anọ iji dozie ma mee ka ọtụtụ ụmụ amaala chee na agha agha nwere ike igbu ha.
GoPro na-akwụsị ire drones ma hapụ ihe karịrị ndị ọrụ 250
GoPro hapụrụ imewe na ọrịre nke drones maka ezi ihe. Chọpụta ihe banyere mkpebi ụlọ ọrụ ịhapụ azụmahịa a.
NASA na-ekwuwapụta na ha achọtala nnukwu mmiri kpụkọrọ akpụkọ na Mars
NASA ka gosipụtara ugbu a na, mgbe ha nyochachara ọtụtụ nyocha na nyocha ha, ha jisiri ike chọpụta ọnụnọ nke nnukwu ice ice dị na Mars.
Ọtụtụ asịrị na-egosi na Huawei agaghị eweta P20 ya na MWC
N'enweghị obi abụọ ọ bụla, ịnwe ozi ọjọọ ga-adịrị ọtụtụ ndị ọrụ na-echere ihe ọzọ na ụdị ihe atụ ndị ọzọ ...
Intel ga-ekpuchi ndị nhazi niile na-erughị afọ 5 site na njedebe nke ọnwa iji kwụsị Meltdown na Specter n'otu oge.
Apple na - eme usoro ndi ozo di iche na ulo oru ndi ozo.
Kodak ga-enwe nke ya cryptocurrency
Kodak na-ebupụta nke ya KODAKCoin cryptocurrency. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ọhụrụ dijitalụ ego site na ụlọ ọrụ.
N'iji uru nke ịdị elu na mgbasa dị ka CES 2018, Fisker chọrọ iju ndị obodo na ndị ala ọzọ anya site na iwepụta ụdị mbụ ma ọ bụ ihe atụ nke Fisker E-motion dị ịtụnanya.
Afọ gara aga 2017, ahịa casset mụbara nke ukwuu. Nke a bụ ekele maka ụda olu abụọ nke ihe ndị na-akụ na azụ
Akpa kaadị akwụmụgwọ na-enweghị kọntaktị na-agụ akwụkwọ mkpịsị aka bụzi eziokwu. Chọpụta karịa maka kaadị akwụmụgwọ Gemalto a
China choro ilaghachi na onwa n’aho a bu 2018, aho ebe otutu ulo oru oghere di iche-iche haputara otutu ndi ozo na satịlaịtị na China ga-aga n’ihu site na izipu osisi na ahụhụ.
Samsung na-ekpughe data nke Exynos 9810, onye nhazi nke Galaxy S9
Exynos 9810 bụzi onye ọrụ gọọmentị: processor nke Samsung Galaxy S9. Chọpụta ihe maka Samsung ọhụrụ processor na-abịa n'ahịa n'oge na-adịghị anya.
Instagram nwere ike imerụ ahụike ọgụgụ isi nke ndị nọ n'afọ iri na ụma
Ọ bụrụ na anyị achọpụta na Instagram na-emetụta ahụike ọgụgụ isi nke ndị ntorobịa anyị? Nke ahụ bụ ihe ọmụmụ kachasị ọhụrụ na-arụtụ aka.
Achọpụta nnukwu nsogbu nchekwa na Intel CPUs
Ekpughere ya na ndị nhazi Intel arụpụtara site na 10 afọ gara aga ruo ugbu a enweghi nnukwu nsogbu na-eme ka ha ghara ịhapụ ọtụtụ arụmọrụ.
Nnwere onwe nke ụgbọ ala eletrik mụbara karịa 50 pasent na afọ 6
Dị ka isi nke akụkọ a na-ekwu, nnwere onwe nke ụgbọ ala eletrik rịrị elu karịa 50 percent ...
Russia furu efu nde euro euro 45 n'ihi "mgbagha"
Dị ka ha na-ekwu, ihe ndị a na-eme ọbụlagodi n’ezinụlọ kacha mma. Eji m n'aka na mmadụ ewerela ...
Anyị ga-amata ihe bụ egwuregwu efu na PlayStation Plus maka Jenụwarị 2018, mana m ga-agwa gị na Deux Ex pụtara ihe niile.
WhatsApp ga-akwụsị ịrụ ọrụ na nyiwe abụọ na njedebe nke afọ
Ihe kpatara ihe ịtụnanya bụ na na December 31, WhatsApp ga-akwụsị ịrụ ọrụ na nyiwe mkpanaka abụọ, na-ebelata ndakọrịta ha.
Ndị omekome nwekwara ike ịdị mma, dịka RAE si kwuo
Academylọ akwụkwọ Royal nke Asụsụ, amatala nke abụọ ihe maka ndị na-agba ọsọ, ugbu a bụrụkwa ezigbo ụmụ nwoke na fim ahụ
Nchaji ama ama na USB ọhaneze bụ echiche dị njọ
Batrị nke smartphones na-aga n'ihu, na ugbu a ga-aga n'ihu, nsogbu ga-amanye anyị ...
Mercedes na otu Linkin Park jikọrọ aka mepụta ụda zuru oke maka ụgbọ ala eletrik
Mercedes ga - esoro ndị otu egwu Linkin Park rụkọọ ọrụ, iji mepụta ụda zuru oke maka ụgbọ ala eletrik AMG nke ụlọ ọrụ Bavarian
Eric Schmidt rida dị ka onye isi ala na Alphabet (Google)
Eric Schmidt, onye isi oche Google nke jiri iPhone, nwoke ahụ mejupụtara ọrụ ntanetị na gburugburu ụwa, na-ahapụzi ọnọdụ ya na Alphabet.
Ogige Apple na Disemba 2017: vidiyo ọhụụ ọhụrụ
Matthew Roberts juru anyị anya ọzọ site na njem ụgbọ mmiri na-eduzi site na Apple Park na otu o si dị na Disemba 2017
Na-anakọta ụgwọ ọrụ na bitcoin? Na Japan ọ ga-ekwe omume
Ihe anyị na-echeghị bụ na ugbu a ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ, mana na anyị nwere ike ịnata ụgwọ ọnwa anyị na bitcoin.
UPS nyere iwu gwongworo eletrik 125 si Tesla
Ozi ọma maka ụlọ ọrụ abụọ ebe Tesla nwere nke a bụ isi ihe mbụ nke ụgbọ mmiri ...
Mwakpo Porg, njirimara njirimara nke Star Wars enweworị minigame
Anyị ga-enwe ike itinye anụ arụ BB-8 n'ọgụ pụrụ iche iji chịkwaa Porg ndị a n'ime Millennium Falcon.
Panasonic na Toyota ga-arụkọ ọrụ ọnụ na imepụta batrị maka ụgbọ ala eletrik
Companieslọ ọrụ ndị Japan, Panasonic na Toyota eruola nkwekọrịta iji mee ka nrụpụta na imepụta batrị maka ụgbọ ala eletrik kawanye ike.
Apple ga - ebido na ndị ọrụ ya Steve Jobs Theater, Apple Park
Ma ọ bụ na mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke iPhone 8, 8 Plus na iPhone X bụ ...
Need chọrọ batrị na Nintendo Gbanye gị? ZeroLemon na-ewetara gị ya
ZeroLemon Battery Charge Case, sistemụ na-enye anyị ihe ruru elekere iri nke nnwere onwe na Nintendo Switch anyị.
BlackBerry KeyONE eze bịarutere Spain
Taa BlackBerry KeyONE abata na ahịa Spanish, mgbe mmadụ na-achọghị ya, ọ nweghị onye rịọrọ maka ya ma onweghị onye tụrụ anya ya.
Anyị niile na-eji GIF eme ihe, ndị a bụ ndị kasị ewu ewu na afọ dị ka Giphy
Obi abụọ adịghị ya na ndị ọrụ na-ejikarị gifs eme ihe ma bara ezigbo uru maka ...
Soro hashtags, nzuzu na-aga nke ọma na Instagram
Will ga-enwe ike iji ọdịnaya kachasị mkpa gbasara ọdịmma gị na-esote site n'ịgbaso otu okwu ma ọ bụ otu n'ime ha.
Ikpeazụ Jedi DLC abịa na Star Wars Battlefront
Kedu otu ọ ga - adị ma ọ bụghị, ụlọ ọrụ na - eme egwuregwu vidio arụ ọrụ siri ike na Disney iji nweta akụkọ niile.
PlayStation 4 na-aga n'ihu na-achị na Spain ogologo oge, mgbe oku ọrụ: WW2 enwetawo ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị na-eso ụzọ na FIFA ka dị.
Asịrị kachasị ọhụrụ banyere arụmọrụ ka mma na batrị dochie na-apụta na Reddit, o doro anya na Apple na-amanye arụmọrụ adịghị mma.
Ndị a bụ vidiyo ndị kachasị ewu ewu na YouTube nke 2017
Yabụ ka anyị lee vidiyo ndị kachasị ewu ewu na YouTube n'oge 2017 ma na Spain ma ụwa ndị ọzọ.
Ọnụnọ nke nje ụfọdụ na afọ gị nwere ike ime ka ị felata ngwa ngwa
Ọmụmụ ihe ọhụrụ a emere na Denmark na-egosi na enwere ike ịmata ụdị nri ị ga-aga dabere na nje dị na ahụ gị.
Chọpụta anyị ole awa ị na-ege egwu na Spotify n'oge afọ 2017 na usoro ole na ole dị mfe.
Sony mara ọkwa na n'oge 2018 na - esote ị ga - enwe ike ịgbanwe aha gị na PlayStation Network, oge eruola ịmalite imepụta ihe.
Bixby dịbu na Spanish, mana ọ bụ naanị United States
Ma na onye inyeaka Samsung dị ka ọ na-enweta batrị na asụsụ, na ...
Nwee ọ theụ rue mgbe fada ekeresimesi rutere yana «Soro Santa»
Otu afọ ọhụrụ, ekele na Google, anyị nwere ike ime ka ụbọchị ndị na-eduga na Christmas Eve bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Ndị a bụ emoji ọhụrụ maka 2018 na ụfọdụ nwere nhọrọ iji gbanwee ha
Anyị enweghị obi abụọ na emoji ga-aga n'ihu na-akawanye mma na nsụgharị na mmelite n'ọdịnihu dị ka ha na-eme maka ...
Gịnị ma ọ bụrụ na Microsoft wepụtara ngwa? Ha na-arụ ọrụ na nke ahụ na Redmond, nke ahụ bụkwa na Windows nwere ike ịnwe AirDrop nke ya.
Imgur abanyego na 2014 ma ha chọpụtara na njedebe nke 2017
Imgur, ọnụ ụzọ ihe oyiyi ama ama, nwetara mwakpo hacker ọtụtụ afọ gara aga. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị ọ na-ahụ ma dọọ ndị ọrụ ya aka na ntị
Amazon na-achọ ndị na-ekesa na Spain na € 14 otu awa, ị na-etinye ndị ọzọ
Onyinye oru ohuru nke Amazon bu ihe di iche, o gha akwu gi ugwo nke € 14 kwa elekere ma oburu na i kesaa ngwugwu ya ... uzo ma obu emeso?
N'oge ngosi nke gwongworo Tesla, enyeghị data ọnụahịa. Ugbu a, anyị nwere ike ikwenye ọnụahịa nke ụdị abụọ ahụ ga-ere
Google gosipụtara nso nso a na ọ chọghị ịma ma ọ bụrụ na ịnwee ọnọdụ arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ maara ebe ị nọ n'oge niile.
Nke a bụ otú ụzọ nke iwu si amalite na otu ụdị loots nke na-akpata nnukwu esemokwu ga-esi amalite ịchị.
Uber kwupụtara na ha tara ahụhụ mwakpo metụtara ndị ọrụ 57 nde
Uber ka kwuputara na akuko akaụntụ 57 nde ndị ọrụ hacked na October gara aga ...
N'oge ọkọchị a, a ga-ewepụta ihe nkiri na "The Incredibles" na ụlọ ihe nkiri, ọ bụ ihe nkiri The Incredibles 2….
OGE ewerela ngwa elekere iri kacha mma nke 2017
Anyị ga-amatakwu nke ọma ihe kacha mma ngwaọrụ nke 2017 abụwo maka TIME magazin na-enweghị mkparịta ụka.
Ọgbọ nke abụọ nke Tesla Roadster, ndị 0 na 100 na-erughị 2 sekọnd
Ọgbọ nke abụọ nke Tesla Roadster bụzi gọọmentị. Cargbọ ala egwuregwu ọhụrụ ọhụrụ zuru ezu si na 0 gaa 2 na ihe na-erughị XNUMX sekọnd
Tesla Semi, nke a bụ ụgbọ eletrik Elon Musk
Tesla Semi bụ ụgbọ ala eletrik mbụ nke American Tesla. Anyị na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgbọ ala ọzọ nke ọdịnihu
Cristóbal, onye nche gị nọ na wiilị. Nke a bụ ọhụụ ọhụrụ SEAT
A na-ejikọ ụwa ụgbọ ala na teknụzụ na nke a njikwa ...
N'oge a ọ dị ka ọ jọkarịrị "ihe jọrọ njọ" ikwu maka ịkekọrịta ọrụ ụlọ n'etiti ndị mmadụ ma ọ bụ ...
Ndị a bụ onyinye kachasị mma na «Countdown» maka Amazon Black Friday
Anyị anọworị n'akụkụ nkuku site na Black Friday, Amazon na-amalite mgbe niile kpoo ọkụ, ọ bụ ya mere ...
Uru nke Black Friday batara na Geekbuying
Anyị ga-enye gị obere njem nke bụ ngwaahịa kachasị mma ị nwere ike ịchọta na taa Geekbuying na-enye na ọnụahịa ndị a na-apụghị imeri emeri.
Otu Alibaba mebiri ndekọ ahịa n'otu ụbọchị na 11/11
Na Satọde 11 nke 11 a maara nke ọma Singles Day na China, na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ ...
Ndị a bụ ndị dakọtara ọnụ na Harry Potter: Wizards Unite
Nke a bụ ndepụta nke ekwentị nke ga-adaba na Harry Potter: Wizards Unite, Pokémon Go ọhụrụ nke dabere na gburugburu Harry Potter.
Xiaomi anaghị akwụsị ma kwadebe mmeghe nke ụlọ ahịa 10 na Spain
Ma ọ bụ na n'oge na-adịbeghị anya anyị gosipụtara akụkọ banyere ọkwa ọdịda nke Xiaomi na Spain na ...
Disney na-ekwe nkwa na ikpo okwu ya ga-adị ọnụ ala karịa Netflix
Taa onye isi ya dị ugbu a amarala ọkwa dị oke mkpa, usoro ntanetị ga-adị ọnụ ala karịa Netflix.
O yiri ka oghere dị na oyi akwa ozone amalitela imechi
Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị nyocha si NASA na National Oceanic and Atmospheric Administration na-ekwupụta na oghere dị na oyi akwa ozone na-emechi.
Vespa Elettrica, ihe nlere Italiantali na-enweghị mmanụ ụgbọala ghọrọ eziokwu
Piaggio ga - emesịa bido ụdị nke Vespa eletrik zuru oke na - esote afọ 2018. Aha ya bụ "Vespa Elettrica" ​​na nnwere onwe ya na-adọrọ mmasị
Lamborghini Terzo Millennio, nnukwu ụgbọ eletrik na teknụzụ ọdịnihu
Lamborghini na-akwalite ụgbọ ala ọzọ ya. Nke a bụ Lamborkhini Terzo Millennio nke na-ebu ọkụ eletrik n'ụzọ zuru ezu
Onye enyemaka Google na-achọpụtazi abụ dị ka Shazam
Ugbu a Google Assistant egosiwo na ọ ga-enwe ike ịchọpụta egwu ngwa ngwa naanị site na ịge ha ntị.
Ethereum Kedu ihe ọ bụ na otu esi azụta ndị ọzọ?
Ihe niile banyere Ethereum na Ether, ọhụụ ọhụrụ na asọmpi cryptocurrency nke Bitcoin. Chọpụta ebe na otu esi eji obi ike na nkwa zụta Ether.
NichePhone-S, ekwentị gam akporo nke juru ya anya na obere pere mpe ya, ka anyị mata ya nke ọma.
Mgbe ọtụtụ asịrị ọ mechara mee ka ọ bụrụ onye ọrụ, Xiaomi bịarutere Spain yana ụlọ ahịa anụ ahụ abụọ na ọtụtụ ngwaahịa na ọnụ ala dị ala.
Bitcoin, kedu ihe ọ bụ, olee otu o si arụ ọrụ na ebe ịzụta Bitcoins
Ihe niile banyere Bitcoin. Kedu ihe ọ bụ, akụkọ ihe mere eme, otu esi azụta Bitcoins, uru ya na isi ike na-adịghị ike nke cryptocurrency kacha ewu ewu.
Ndi Apple Nweta NJ Njirimara di iche n’etiti umu ejima? Eleghị anya ọ bụghị
Apple kwere anyị nkwa na ngosi ahụ na Face ID dị oke nkenke na ọ ga-enwe ike ịkọwa ọdịiche n'etiti nwanne ejima, mana ọ dị ka ọ bụghị.
Site na okpu a, Ford chọrọ igbochi ndị na-anya gwongworo ịrahụ ụra na wiil
Uzo njem ugbo ala bu otu n’ime ihe kacha mkpa na obodo obula, ma oburu n’abughi na anyi nwere ...
IONITY, netwọkụ nke chaja ndị chọrọ ịbawanye na Europe dum
IONITY chọrọ ịkwadebe Europe na ọdụ ụgbọja chaja 400 maka ụgbọ ala eletrik. Na-agba ọsọ dị ka onye isi osompi nke Tesla
Opel na-etinye nkeji iri abụọ mbụ nke Grandland X SUV na ire ere site na Amazon Spain. Ọrịre ahụ dị ọsọ ma kwekọọ na ndoputa ndozi
Ndị a bụ premieres nke Netflix na November 2017
Anyị na-ewetara gị ndepụta doro anya nke ị ga-enwe ike ịchọpụta ihe dị na Netflix Spain na-ewetara anyị n'oge ọnwa nke ọnwa November 2017
Daimler E-Fuso Vision One, nke mbụ igwe eletrik zuru ezu dị ebe a
Fuso-E Vision One bụ igwe eletrik mbụ nke Daimler. Njikwa obodo ya dị narị kilomita atọ na ise ma ọ nwere ike ibufe tọn iri na otu
Microsoft Andromeda bụ otu n'ime ọrụ ndị ụlọ ọrụ Redmond na-arụ ọrụ. Ọ ga-abụ reinvention nke dijitalụ ji ede ihe
Honda na-ewebata RoboCas, ngwa nju oyi nke nwere ọdịdị dị mma
Honda RoboCas bụ igwe eletrik zuru oke, echiche ụgbọ ala pere mpe nke nwere ike iji rụọ ọrụ dị iche iche.
Shipsgbọ mmiri Google ezughị oke Pixel 2 na ndị ahịa
Ngwunye Google Pixel 2 a anyị kwurula banyere ya agabigabeghị njikwa ụlọ ọrụ dị n'ime ya, ọ ka na-ezigakwa.
Opel anaghị enye ezu na arụpụta ọkụ eletrik ya, Ampera-e
Opel aghaghi ikwusi ire ahia nke Ampera-e ya na Norway n'ihi oke ochicho nke na o nweghi ike kwado.
Ndị a bụ ụbọchị nke leaked Steam rịọ
Oge Steam ọzọ a na-ere ere abanyela na afọ 2017 fọdụrụnụ, ịchọrọ ịma ha? Anyị na-ewetara gị ya oge niile na Akụrụngwa Actualidad.
Mụaka na smartwatch, nchịkọta dị mma?
O yiri ka nchekwa ụmụaka anaghị abawanye ụba ma a bịa ịgụnye ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi na obere bebi ha.
Gigabyte Aorus X9, laptọọpụ egwuregwu na-egwu egwu
E nwere otu ihe dị mkpa ndị ọrụ chọrọ ka laptọọpụ na-egwu maka mkpa agagharị dị iche iche, Gigabyte na-enye ha Aorus X9.
Ugbu a ị nwere ike ịkekọrịta ego na enyi Facebook site na ngwa ozi nke onye ọrụ ọ bụla nwere.
Companylọ ọrụ Korea emeela mkpọtụ na Bixby na-ebupụta ọgbọ nke abụọ iji jikwaa ngwaọrụ ndị dị mma n'ụlọ anyị.
Razer Blade Stealth na Razer Core V2, nke kachasị na egwuregwu
Firmlọ ọrụ na-egwu egwuregwu Razer na-ekwupụta ọkwa ọhụụ 2017 ọhụrụ ya, laptọọpụ Razer Blade Stealth 2017 na Razer Core V2 mpụga GPU
La Caixa na ImaginBank dakọtara na Apple Pay
La Caixa na ImaginBank ndị ahịa nwere ike iji kredit na kaadị akwụmụgwọ ha na ọrụ Apple Pay site taa
Huawei Mate 10 na Mate 10 Pro bịarutere: Ahịa na atụmatụ
Huawei Mate 10 na Mate 10 Pro, echefula isiokwu a nke anyị ga-agwa gị ọnụahịa, nkọwa na mgbe ị ga-enwe ike ịzụta ha.
Microsoft Edge dị ugbu a maka nbudata site na Google Play n'ụzọ ọrụ, ọ bụ ezie na ọ ka nọ na beta.
Vidiyo vidiyo 360º na ekwentị, ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya
Anyị chọrọ ka ị mara ntakịrị ihe gbasara ihe vidiyo vidiyo 360º bụ ihe otu ị ga - esi nweta ọtụtụ ihe na ekwentị mkpanaaka gị.
Bitcoin karịrị ma nọgide karịa $ 5000
Ọzọkwa, Bitcoin na-egosi anyị na ewu ewu ya anaghị akwụsị ito, karịa $ 5.000
OnePlus na-anakọta data doro anya site na ndị ọrụ na-enweghị nkwenye ha
Onye na-ahụ maka sayensị kọmputa chọpụtara na OnePlus na-anakọta ma na-ebunye data na ozi nzuzo nke ndị ọrụ ya na njedebe ha
Samsung weputara igwe ihe nhicha ohuru dika Darth Vader
Samsung na-elekwasị anya na Star Wars ihe ọhụụ, nke mere na ha ebutela ụdị robot agụụ abụọ na-anọchi anya ndị si na Star Wars saga.
Telegram mmelite na-enye gị ohere ịkekọrịta ọnọdụ gị n'oge
Site na Telegram ị nwere ike ịkekọrịta ọnọdụ gị ugbu a na ndị enyi gị, ọrụ ọhụrụ nke na-eme Telegram bụ ihe ọzọ na WhatsApp.
Nke a bụ etu WhatsApp Business ga-esi rụọ ọrụ, nke amalitela ule mbụ ya na Spain
WhatsApp Business abụrụla eziokwu nke a na-anwale na Spain ma taa anyị na-agwa gị nkọwa niile gbasara ụdị ngwa a.
Beta 2 nke iOS 11.1 ga-abata na-agbakwunye na akụkọ, mmezi ahụhụ na emojis, nke anyị chere ga-erute na nke ikpeazụ.
Amazon ga-echebara ịbanye n'ahịa ahịa ọgwụ iji nye ọgwụ ọgwụ n'ịntanetị
A na-ekpughe ihe nzuzo kacha mma n'ime Xbox One X
Ka anyị lee ihe akwa akwa a nke ụlọ ọrụ Microsoft zoro na Xbox One X mejupụtara ya, ọ nwere mmekọrịta ochie nke Microsoft.
Airbus iji nwalee tagị ụgbọ elu CityAirbus na 2018
Airbus bu n’obi ịnwale tagzi na-efe efe na-esote afọ. The mbụ ule nke CityAirbus e dechara nke ọma
Ndị a bụ mmalite nke Netflix, HBO na Movistar + na Ọktọba
Ọnwa a nke ọnwa Ọktoba na-abịa na ihe ndị na-adọrọ mmasị na Netflix na ebe ndị ọzọ iji nyochaa, dịka Movistar + na HBO Spain.
Verizon na-akwado nkwupụta na 2013 Yahoo mbanye anataghị ikike emetụtala ihe niile ijeri ọrụ akaụntụ 3.000
Iri TV Igbe na gam akporo maka mmefu ego niile
Nọnyere anyị ma chọpụta nke kachasị ọnụ ala gam akporo TV Igbe ndị ọzọ maka gị, na-emegharị maka mkpa gị.
Ndị na-eme nnyocha na Spanish na-ejikwa ịzụlite mmanya na-enweghị hormone histamine, isi ihe kpatara mmetụta ọjọọ na isi ọwụwa mgbe ị na-aingụ ya.
Metal Gear V na Amnesia Collection na-egwu ha na PS Plus na Ọktọba
A na-achọta ụfọdụ ihe egwuregwu vidio dị egwu kwa izu n'efu na ndenye aha PlayStation Plus.
AI mere na Spain nke na-eme ka ịgafe ọkwa dị nchebe na United Kingdom
Amamịghe echiche na-esite na Spain, nke mere na ha nwere ike ịkwụsị ịchịkwa ọkwa dị na United Kingdom
Mgbe afọ abụọ gachara, Apple TV malitere ịpụta nwayọ na ụlọ ahịa Amazon, tupu mwepụta nke Prime Video app
Instagram chọrọ ka ijide njide ihe na mmelite a
Ihe omuma ohuru ohuru nke otutu ndi oru choro, ha abiala.
Anyị nyochaa FIFA 18, ọ bụ ka Eze nke dijitalụ football
Taa, anyị ga-enyocha egwuregwu vidiyo bọọlụ kacha ere ere nke ga-aga n'ihu na-achị afọ a, FIFA 18.
IPhone 8 na-eguzogide ọgwụ karịa ka o yiri ka ọ na-ele ya anya
N'agbanyeghị ihe nwere ike iyi ka ị na-ele ya anya, iPhone 8 ọhụrụ ahụ, nke adịlarị na ahịa, na-eguzogide ọgwụ karịa ka anyị niile chere.
DxOMark na-agọzi igwefoto iPhone 8 na iPhone 8 Plus na-atụle ya oge kachasị mma
IPhone 8 adịworị na ahịa ma dịka DxOMark si kwuo, igwefoto ya kachasị mma na ahịa ahụ, na-eche oge nke iPhone X.
NASA na Russia ga-arụkọ ọrụ ọnụ na mmepe nke oghere Ọdụ Ọhụrụ na Ọnwa
Roscosmos, ndị Russia Space Agency, ka kwupụtara na ọ ga - esonye na NASA maka mmepe nke oghere Space na Ọnwa.
Wiko na La Vecina Rubia sonyere ndị agha ka ha wepụta Edemede Dị Mma, Ngwa iji mee ka ndị ọrụ mara etu esi asụpe ya.
Oge nke eziokwu abiala, ụdị nke iOS 11 dị na sava ma ị nwere ike ibudata ya, yana watchOS 4 site ugbu a gaa n'ihu.
Fortnite bụ egwuregwu mbụ nke kwere ka usoro a chọrọ nke ukwuu, ọ dịkwa ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị onye chọpụtara, ruo ugbu a.
Na mgbakwunye na Tesla, enweelarị ndị na-akụ nzọ na igwe eletrik na ụdị ha n'ọdịnihu. Ugbu a enwere ugbua kọmpat ụgbọ ala na ...
Ọbụna ndị ọrụ Uber na-arụrụ ụgwọ dị ka a ga - asị na ha bụ ndị nweere onwe ha
Courtlọ ikpe dị na Barcelona katọrọ Uber ka ọ mata ogo nke otu n'ime ndị njikwa ya mbụ bụ ndị ọ goro ọrụ dị ka ụlọ ọrụ
PlayerUnknown's Battlegrounds na-agbaji ihe ndekọ Steam ma na-aga n'ihu na-eto
Ma nke ahụ bụ otú PUBG si mee ya ọzọ, na-eti ndekọ maka ndị egwuregwu n'otu oge na Steam nke Dota2 chịrị ruo ugbu a.
Honda Urban EV Concept, eletrik ndị Japan nwere ụdị German
Honda Urban EV Concept bụ ụgbọ ala eletrik mbụ nke ụlọ ọrụ Japan. Na mgbakwunye, ntinye nke netwọk eletrik nwere ọgụgụ isi na-ezubekwa.
HBO kpebiri ime ka ihe sie ike maka nkwụsị ahụ ma maka nke a ọ ga-edekọ ọtụtụ njedebe nke oge ọhụrụ nke Game nke n'ocheeze.
Audi Aicon bụ echiche nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na Ngosipụta Ngosipụta Frankfurt nke 2017. Ọ dị mbara, egwuregwu na ọgbara ọhụrụ na teknụzụ.
Ndị uweojii dọrọ aka na ntị banyere aghụghọ WhatsApp ọhụrụ na-ezuru data nkeonwe ndị ọrụ site na ịnye Kupọns ego ego adịgboroja adịgboroja
Ihe ohuru nke iPhone X abiala n’ihu ma taa anyi n’egosi gi onu ahia nke Apple ohuru n’ime otutu mba n’uwa nile.
The iPhone X, ekwentị nke Apple ga-achịkwa njedebe dị elu
Mbipụta pụrụ iche iPhone, akpọ iPhone X, enyela mgbanwe zuru oke na ihe anyị hụgoro na Apple.
Nke a bụ ihe ọgbọ ọhụrụ Apple Watch dị
Banye ebe anyị ga-ekwu maka ngosi nke ọgbọ ọhụrụ nke Apple Watch, ngwaọrụ nke emezigharị kpamkpam.
OLED ngosi teknụzụ ewepụtara na iPhone X nwere ike ịkwalite ahịa iPhone ma gbasaa ngosipụta ndị a na ụlọ ọrụ ahụ
A ikpeazụ nkeji akụkọ na-ekpughe na Apple enweghị njikere inductive wireless Nchaji isi dakọtara na ọhụrụ iPhone X, iPhone 8 na 8 Plus
Apple kwụsịrị ụfọdụ nsụgharị nke Apple Watch, na-akwado na taa anyị nwere ike ịhụ Apple Watch Series 3 ọhụrụ.
IPhone X ga-amalite izizi isi ihe isii nke Apple, A11 Fusion chip, yana arụmọrụ 2 na 4 nwere ike ịrụ ọrụ ike.
Xiaomi taa gosipụtara ọhụrụ Mi Notebook Pro, kọmputa sitere na Apple's MacBook na nke a ga-akwụ ụgwọ na 900 euro.
Xiaomi egosiputa ohuru Mi MIX 2 nke biara n’ahịa di njikere iguzo na uzo ozo obula di ta.
Ọnwụ nke koodu iOS 11 emeela ka anyị mata na iPhone X ọhụrụ agaghị abịa naanị ya, ọ ga-eme ya na Apple Watch Series 3.
Otu ìgwè ndị Japan na-enyocha mbara igwe ka kwupụtara ọkwa nke nchọpụta nke elere anya dị ka nke abụọ kachasị ojii na Milky Way.
Jaguar FUTURE-TYPE, nke a bụ otu ụlọ ọrụ si ahụ ụgbọ ala nke 2040
Tụleela ụdị ụgbọ ga-adị ka afọ 2040? Jaguar ee ma gosipụta echiche ya nke dị na Jaguar FUTURE-TYPE
China na-arụ ọrụ n'ụgbọ oloko nwere ike iru 4.000 km / h
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka oru ohuru nke China nke na-achọ ịmepụta usoro njem mgbanwe nke nwere ike iru 4.000 km / h.
Google na-ekwuputa njedebe nke ngwa Google Drive maka Mac na PC
Ngwa Google Drive maka Mac na PC ga-apụ n'anya na Machị 2018 nke ndị ọzọ Google gbanwere
Google ga eme ka igwe foto Street Street lelee mgbe afọ asatọ jiri otu teknụzụ ahụ
Google ga emeziwanye ese foto eji na Google Street View. Site ugbu a gaa n'ihu ọ ga-ekwe omume ịnakọta ozi dị mkpa maka onye ọrụ ahụ
Facebook na-akwadebe agha megide YouTube
Facebook chọrọ iguzo na YouTube ma na-eme ya site na ịnye ọtụtụ nde dollar ndị na-ejide ikike nwebisiinka
Nissan LEAF 2018, nke a bụ eletriki ọhụrụ na-ere ahịa na Spain
Nissan LEAF 2018 bụ ọgbọ nke abụọ nke ihe nlereanya a. Ọ dị ike karị, yana nnwere onwe ka ukwuu yana teknụzụ inyeaka ọhụrụ
Gini mere keyboard QWERTY ji enwe nhazi di otua
Ọ bụrụ n ’ichetụbeghị ihe kpatara eji arụ ụlọ ọrụ QWERTY ahụ, anyị ga-ekwu maka ajụjụ a na-atọ ụtọ.
Apple Pay na-etolite, mana ọ nwere obere ohere na Spain
Cuplọ ọrụ Cupertino ka kwuputara na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ iri na atọ abanyela na ikpo okwu na United States of America.
Tesla kwadoro na ọ ga-emepe ụlọ ahịa mbụ ya na Spain na obodo Barcelona. Anyị nwekwara adreesị ebe ọ ga-adị.
Sayer, igwe nlegharị anya nke dị na Jaguar nke ga-eso gị n'ọdịnihu
Sayer bụ Jaguar nwere ọgụgụ isi nke na-achọ iso ndị ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla ga-abụ onye inyeaka nke ha
Reddit na-ewepu ohere ịnweta koodu isi ya
Guysmụ okorobịa nọ na Reddit ekpebiela iwepu ohere ịbanye na koodu isi mmalite nke weebụsaịtị, koodu dịnụ kemgbe e kere ya
Telegram 4.3 dị ugbu a na mmelite ohuru na njikere ịnọgide na-asọmpi na WhatsApp
Telegram ka ulo oru a ọhụrụ update na-akpali mmasị ndozi na ozi ọma, na nke na-anọgide na-asọmpi na WhatsApp, eze ozi.
Kaadị microSD Sandisk nyere anyị 400 GB nchekwa
Sandisk ewepụtala kaadị microSD ọhụrụ ya na IFA 2017, nke ghọrọ akụkọ maka ịnye anyị nchekwa 400 GB.
Segway miniLITE na miniPLUS, ụdị ọhụrụ maka njem njem ọsọ ọsọ na nchekwa
Segway amalitela skuta igwe eletriki ọhụrụ abụọ ga-enwe ike ịga njem ruru kilomita iri atọ na ise n’otu ụgwọ. Ha bụ Segway miniLITE na miniPLUS
Daimler nwere ọhụụ pụrụ iche nke ọdịnihu nke ụgbọ ala. Ọ na - eme ya site na ọhụụ ọhụụ EQ fortwo nke ọma: ụgbọ ala eletrik na nke kwụ ọtọ.
MINI ya na ndi otu BMW egosiputara ihe nlele nke MINI eletriki. Nke a bụ MINI Electric Concept na a ga-ere ya na 2019
Kirin 970, onye nhazi mbu nke nwere ọgụgụ isi ọgụgụ isi
Echi Huawei ga-eweta Kirin 2017 n'ime IFA 970, ma ọ bụ otu ihe ahụ, onye nhazi mbụ nwere ngalaba ọgụgụ isi.
Alcatel na-eweta arụsị ọhụrụ 5 nke na-etu ọnụ maka imewe na igwefoto maka ọnụ ala
Ihe ọhụrụ Alcatel Idol 5 bụ onye ọrụ ugbu a ka ebuputere ya na usoro nke IFA 2017 nke a na-eme na Berlin ụbọchị ndị a.
Ndị a bụ akụkọ niile Sony gosipụtara na mmemme IFA 2017 ya
Sony nọ na-arụsi ọrụ ike na IFA 2017 na n'isiokwu a anyị na-egosi gị ngwaọrụ niile enyere n'ihu ọha.
Instagram kwenyere na ọ merụrụ ọgụ nke nyere ndị omekome ohere ịnweta data nke onwe ha nke ụfọdụ akụkọ profaịlụ dị elu
Ọ bụ ọrụ gọọmentị, Apple ga-eweta iPhone 8 na Septemba 12
Apple ka kwupụtara na Septemba 12, ọ ga-eme ihe omume nke anyị ga - ahụ iPhone 8 ọhụrụ.
Ugbua amalitela katalọgụ IKEA 2018 ọhụrụ. Anyị na-agwa gị otu esi anụ ụtọ akụkọ niile ebe mbipụta gị bipụtara
Aston Martin chefuru mmanụ dizel na mmanụ ụgbọala, ihe niile na ngwakọ eletrik
Aston Martin sonyere na ihe a choro ma choo ka ugbo ala ya buru ngwakọ ma obu zuru oke site na etiti 2020s
YouTube na-agbanwe akara ngosi ya ma na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ
Ma ama YouTube gụgharia video ọrụ ukwu agbanwe ya logo na a na-emelite mgbe afọ 12 nke ndụ. Ihe ohuru na abia
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịse anwụrụ Netflix kachasị amasị gị?
N'oge mmemme pụrụ iche na California, Netflix rere wii wii nke sitere na ụfọdụ usoro izizi ya
Movea na-ere ahịa nke ngwa mgbakwunye ngwongwo rịa elu 300%
Atụmatụ Movea enyerela ire ahịa nke ụgbọ ala eletriki dị ọcha na ngwakọ ngwakọ na-arị elu na August a
ESA dọrọ aka na ntị na asteroid ga-agabiga ụwa nke ọma na Ọktọba 12
ESA, ndị European Space Agency, ekwuputala na ha achọpụtala igwe ikuku nke ga-agafe ụwa nso na Ọktọba 12.
Truckgbọ ala izizi mbụ kwurula nke ọma na-agbasa na US
Na United States, e meela nnwale izizi nke ụgbọ ala kwụụrụ onwe ya. O nweela ihe ịga nke ọma nke ga - eme ka teknụzụ na - aga n’ihu
Ariel kwere nkwa na supercar eletrik na 1.180 hp
Britishlọ ọrụ Britain bụ Ariel ga-ebupụta supercar eletrik na ahịa nke na-ekwe nkwa ike kachasị nke 1.180 hp na ọnụọgụ nke 1.800 Nm
IBM na-achịkwa ịchekwa terabytes 330 na obere mpempe magnet
Nkwupụta sitere na IBM na-agwa anyị na ha jisiri ike chekwaa terabytes 330 nke ozi na obere mpempe magnet.
Samsung Galaxy Note 8 anyị enweghị obi abụọ na ị ga-ahụ ya karịa ekwentị. Ọ bụ nnọọ ngwá ọrụ maka ọtụtụ ihe
Securitylọ Ọrụ Nchebe Internetntanetị na-adọ aka ná ntị na ịdị adị nke mgbasa ozi na mbipụta na Facebook banyere ụlọ ahịa adịgboroja na-ezu ohi data site na ndị ọrụ
Ọhụrụ, ọtụtụ ụdị ọkaibe nke malware na-eyi egwu izuru nkọwa ịkwụ ụgwọ nke ndị ọrụ ngwaọrụ gam akporo
Ihe omuma Electronic kwusiri mmepe nke Mass Effect: Andromeda
Mass Mmetụta: Akwụsịla Andromeda na otu ọkpụkpọ ọkpụkpọ ya maka nyiwe niile, a kwadoro na agaghị enwe DLC maka egwuregwu ahụ.
Electric VW Microbus kwadoro nke ụlọ ọrụ maka 2022
Companylọ ọrụ German Volkswagen ka kwupụtara ọkwa na-adọrọ mmasị: ọ ga-ebupụta na 2022 ihe ọhụụ ọhụrụ: VW Microbus electric
Google choro ka anyi jiri nnu mee ihe maka nchekwa nke ume ohuru
Otu n'ime ọrụ kachasị ọhụrụ nke ngalaba nyocha Google nke X rụrụ jisiri ike chekwaa ume ọhụrụ na batrị nnu.
Product Ili, nke a bụ na-eli ozu nke chetara ngwaahịa
You na-echeta ngwaahịa ezumike nká dị ka Google Reader, Windows Live Messenger ma ọ bụ Picasa? A na-achịkọta ha niile na Product Graveyard
Beckham ga-abụ onye nnọchi anya akụkọ na PES 2018
Arụsị Britain bụ David Beckham ga-abụ Onye Nnọchiteanya Ochie nke PES 2018, na-edebanye aha ya na ndị Japan Konami, onye nrụpụta nke PES.
Specdrums, ụzọ dị omimi iji tinye ụda na mkpịsị aka gị
Gbanwee agba n'ime ụda ma mepụta ụda nke gị. Nke a bụ ebumnuche nke Specdrums, ụfọdụ yiri mgbaaka ndị bụ ...
Batrị Samsung dara ọzọ, agbanyeghị na ọ bụghị ya kpatara ya
Kọmịshọn Azụmaahịa Ahịa (CPSC) na-ekwupụta dochie batrị nwere nkwarụ na ekwentị Samsung ọzọ, Nkọwa 4
«Ntinye n’ oge, ma ọ bụ otu esi anakọta nzụta gị na Amazon na naanị nkeji 2
Amazon meghere Ntinye ngwa ngwa na United States, ebe nchịkọta ndị ọrụ nwere ike ịnakọta ihe ha zụtara naanị nkeji abụọ
Mkpa ọ dị mgbe a na-eji PC
Ọ bụ ya mere anyị ga-eji kwuo ntakịrị banyere mkpa ọ dị ịnọgide na-enwe ọnọdụ ziri ezi mgbe ị na-eji PC, na-ezere mmerụ ahụ na obere mgbu.
Ihe dinosaur Google Chrome biara n'ụdị egwuregwu na Google Play
Google dinosaur dinosaur abiarue Google Play, n'ụdị egwuregwu zuru oke, ma kpọọ ya Jumping Dino